Madaxweynaha Jubbaland Oo Sheegay In Ay Bilaabayaan Howl-galo Ka Dhan Ah Al-Shabaab (Sawirro) – Radio
Madaxweynaha Jubbaland Oo Sheegay In Ay Bilaabayaan Howl-galo Ka Dhan Ah Al-Shabaab (Sawirro)
October 26, 2017	319	Like
Kismaayo (C-Nabadda)-Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta booqday Xerada Ciidamada Darawiishta Jubbaland ee deegaanka Buulo-Guduud oo qiyaastii 30km dhinaca waqooyi ka xigta Magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha ayaa la hadlay Ciidamada oo u diyaar garoobaya hawlgalo Al-Shabaab lagaga saarayo Gobolka Jubbada Dhexe iyo qaybaha ay wali kaga dhuumalaysanayaan Jubbada Hoose.
“Al-Shabaab ma haystaan awood ay idinkaga hor imaan karaan waxa kaliya oo ala gudboon waa in aan weerarno oo god iyo geedba aan ka daba galno” ayuu yiri Axmed Madoobe.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in gabo gabo uu marayo diyaarinta hawlgal weyn oo Jubbaland oo dhan ka bilaabanaya, sidaas darteedna uu wakhtigiisa ugu badan ku qaadan doono xeryaha Ciidamada iyo abaabulka hawlgalka lagu naafaynayo Argagixisada.
Ciidamada Darawiishta Jubbaland ayaa maalmahii lasoo dhaafay Hawlgalo ka sameeyeen qaybo ka mid ah deegaanada gosha halkaas oo ay ku burburiyeen saldhigyo Shabaab ku laheyd deeganadaas , Madaxweynahu wuxuu sheegay in taasi ay banaanka soo dhigtay sida aysan Al-Shabaab awood ugu lahayn in ay sii jirto.
Muqdisho (C-Nabadda)-Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu ...